के डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति फेरी होलान? - समय-समाचार
के डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति फेरी होलान?
१ असार २०७७, सोमबार ०२:०५
असार १, २०७७ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका लागि पछिल्ला केही साता निकै सकसपूर्ण भएको छ। कोरोना महामारीको प्रकोप र अश्वेतहरूको आन्दोलन उनका लागि खराब समाचार हो। तर आफ्ना लागि प्रतिकुल अवस्थाकै बीच उनी आगामी राष्ट्रपतीय चुनावका लागि प्रचारमा निस्किएका छन्। अहिलेको चुनाव प्रचार यसअघिको जस्तो सहज छैन।
ट्रम्पको चुनावी अभियान प्रभावित भइरहेको छ। पछिल्लो अवस्था नियाल्दा यस्तो लाग्छ: ट्रम्प संकटहरूमा घेरिँदै गएका छन्। दोस्रोपटक राष्ट्रपति चुनिने उनको आकांक्षामा यो संकट हावी भइरहेको छ। चार वर्षअघि पनि उनी राष्ट्रपतीय निर्वाचनको मैदानमा दौडिँदै थिए। त्यतिखेर सबै अनुमान र भविष्यवाणीहरूलाई किनारा लगाउँदै उनले पार्टीभित्रबाट राष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवारको दौड जिते। राष्ट्रपति बनिछाडे।
ट्रम्पले यतिखेर सन् २०१५ को जुलाई महिना सम्झिरहेको हुनुपर्छ। किनकी त्यतिखेर पनि उनलाई त्यति सहज थिएन। अरु मानिसहरूलाई जोडेर लागेका आरोप, विवाद, असंयमित ट्वीटजस्ता कारणले उनी राष्ट्रपति पदबाट टाढै रहन्छन् भन्ने आंकलन गरिएको थियो। तर यस्ता अवरोधहरूलाई चिर्दै उनी राष्ट्रपतिमा चुनिए। त्यतिखेर सबै विशेषज्ञहरू गलत सावित भएका थिए र ट्रम्प चाहिँ सही।
चुनावमा उनी स्वतन्त्र उम्मेदवार झैं प्रस्तुत भएका थिए। यसरी राष्ट्रपति चुनिएको चार वर्षपछि ट्रम्पको स्वाभाविक प्रवृत्तिले उनलाई धोका दिन सक्छ। ट्रम्प सन् २०१६ मा आफूले हासिल गरेको जीतलाई दोहोर्‍याउन चाहन्छन्। सत्ता प्रतिष्ठान अर्थात वासिंटनको दलदलमा विपक्षी उम्मेदवारसँग उनी भिडिरहेका छन्। अघिल्लो चुनावमा उनलाई अस्थिर र परम्परागत दुवै प्रकारका मतदाताहरूले शंकाको सुविधासहित मत दिएका थिए।
ती मतदाताहरू यस्ता थिए, जसले अन्तिम समयसम्म पनि कसलाई भोट दिने भन्ने निक्र्यौल गर्न सकेका थिएनन्। तर बुथभित्र पसेपछि ट्रम्पलाई नै मत दिएका थिए। तर यसपटक ट्रम्प कुनै नचिनिएका र परीक्षण नगरिएका उम्मेदवार होइनन्। मानिसहरूले उनको चार वर्षे कार्यकाल भोगिसकेका छन्।
यद्यपि, अहिलेपनि उनीमाथि भरोसा गर्ने मतदाता ३० देखि ४० प्रतिशत छन्। तर सर्वेक्षणहरूले चाहिँ शहरका वृद्धवृद्धा, शहरी क्षेत्रका शिक्षित मतदाता र धार्मिक मतदाताहरूको समर्थन ट्रम्पले गुमाउँदै गएको देखाएको छ। यो क्रम अझै बढे उनका लागि ह्वाइटहाउससम्मको दोस्रो यात्रा असम्भव हुनेछ। प्रतिद्वन्द्वी बाइडनभन्दा पछाडि ट्रम्पको जारी चुनावी यात्रा पनि सन् २०१६ कै तासपत्ती जस्तो छ। विवादलाई चर्कारहेका छन्।
सामाजिक मुद्दा हल गर्नुको साटो तनावलाई निमन्त्रणा गरिरहेका छन्। षडयन्त्रकारी सिद्धान्ततर्फ अघि बढिरहेका छन् र आलोचनाको जवाफमा आलोचना नै फर्काइरहेका छन्। यी सबै परिघटनाहरूको पृष्ठभूमीमा गरिएको सर्वेक्षणले ट्रम्प प्रतिद्वन्द्वी जो बाइडेनभन्दा पछि परेको देखाएको छ। केही सर्वेक्षणमा त ट्रम्प दोहोरो अंकभन्दा बढीले पछाडि परिसकेको दावी गरिएको छ। बाइडेनले ६ मा ५ अङ्क प्राप्त गरेका छन्।
स्थिति यस्तै रहे सन् २००८ मा बाराक ओबामाले झैं बाइडेनले पनि सहजै चुनाव जित्न सक्नेछन्। ट्रम्पले यो चुनावमा पनि सन् २०१६ कै रणनीति अपनाइरहेका छन्। समस्या बताउँदै भोट मागिरहेपनि यसपटक अमेरिकाको राष्ट्रिय भंगिमा अलग देखिएको छ। अमेरिकाका आम मानिसहरू कोरोनाको चपेटामा परेका छन्।
महामारीका कारण एक लाख भन्दा धेरै मानिसको ज्यान गइसकेको छ। अर्थतन्त्रमा गिरावट आएको छ। नश्लभेद र प्रहरीको व्यवहारलाई लिएर देशभर विरोध प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। जुन युद्धधर्मिता र मुर्खताले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई विगतमा फाइदा पुर्‍याएको थियो : अहिलेको अवस्थामा पुरानै तरिका जनताको भावनासँग मेल नखाने भैसकेको छ। कानूनी व्यवस्थाको दुहाई दिइरहँदा पनि मानिसहरूको धर्ना नाटकीय रुपमा बढेको छ। ब्ल्याक म्याटर आन्दोलनमा आम सहभागीता बढिरहेको छ।
यसले के देखाउँछ भने आगामी नोभेम्बरमा मानिसहरूले भोट हाल्दै गर्दा नस्लीय भेदभावको समस्या सम्झनेछन्। यसो हुँदा ट्रम्पलाई निकै क्षति हुनेछ। कानून या व्यवस्थाको अभियानले सन् १९७० को सुरुवातमा नागरिक विद्रोह दमन गर्न सघाएको थियो।
रिचर्ड निक्सनलाई यही अभियानले राष्ट्रपति पनि बन्न पनि सघायो। तर अहिलेको अमेरिका ५० वर्ष अघिको जस्तो छैन। राज्यको दमनलाई कानूनी व्यवस्थाको उपमा दिन अमेरिकीहरू तयार छैनन्। विरोध प्रदर्शनको असर पछिल्लो केही सातामा अमेरिकामा देखिएका नयाँ मामिलाहरूले त्यहाँको विद्यमान राजनीतिक स्थिति सजिलै थाहा पाउन सहयोग गरेको छ।
यतिसम्म कि, लोकप्रिय कार रेसिङ सर्किटमा संघीय झण्डा फहराउन पनि रोकिएको छ। स्थानीय र प्रान्तीइ नेताहरूले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका कन्फेडरेट जनरलका प्रतिमाहरू हटाउन सुरु गरेका छन्। सैन्य अखडाहरूबाट यी जनरलको नाम हटाउन अमेरिकी सेनाभित्रै आवाज उठ्न थालेको छ। यी दिनहरूमा अमेरिकाभित्र एक सांस्कृति संघर्ष देखिएको छ।
प्रहरीको अन्यायपूर्ण काम गराईप्रति व्यवसायिक खेलाडीहरूले राष्ट्रियगान बजिरहेका बेला घुँडा टेकेर विरोध जनाएका छन्। नेशनल फुटबल लिगले यी खेलाडीहरूलाई साथ नदिने घोषणा गरेको छ, जुन कुनै आश्चर्यजनक विषय भने होइन। यसलगायत ट्रम्पले आफ्नो अनुकूलताका लागि गरेको सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग लगायतका घटनाहरू दोहोरिइरहेका छन्।
के ट्रम्पले हार्नेछन् ? विपक्षी र आन्दोलनकारीहरूलाई बदनाम गर्न ट्रम्पले कुनै कसुर बाँकी राखेका छैनन्। संकटका समयमा उनले जस्ता अभिव्यक्ति र फैसला दिइरहेका छन्, त्यसले उनलाई फेरि राष्ट्रपति चुनिने यात्रामा निकै मुस्किल पैदा गरिरहेको बीबीसीमा उल्लेख छ। अमेरिकामा राष्ट्रपतीय चुनाव हुन अझै चार महिनाभन्दा बढी समय बाँकी नै छ।
आफ्नो स्थिति बलियो बनाउन र बाइडनलाई कमजोर बनाउन ट्रम्पका लागि अझै सम्भव छ। ट्रम्पप्रति डेमोक्रेटिकहरूको समर्थन अझै कायम छ। सन् २०१६ मा हिलारी क्लिन्टनप्रति देखिएभन्दा अहिले ट्रम्पप्रति देखिएको समर्थन बलियो छ।
तर यसपटक उनी खास र लोकप्रिय उम्मेदवार भने रहने छैनन्। सन् २०१६ को चुनावी रणनीतिलाई नत्यागे ट्रम्प फेरि राष्ट्रपतिमा चुनिन असम्भवजस्तै छ।
उनले अमेरिकी जनतालाई अर्को कार्यकालमा अहिलेको भन्दा असल राष्ट्रपति बन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ।